Spotify anogara pamiriyoni imwe yemamirioni mazana matatu evashandisi pamwedzi | Ndinobva mac
Spotify inoramba iri miriyoni yemamiriyoni mazana matatu evashandisi vemwedzi
Ndichiri kuApple zvinoita sekudaro havadi kuzivisa zvakare nhamba pamusoro pehuwandu hwevanyoreri Yayo yekushambadzira mimhanzi sevhisi, kambani yeNorway Spotify, ichangobva kuzivisa mhedzisiro yayo yezvemari yekota yechipiri ya2020, kota yakatarwa necoronavirus uye yakaratidza kuti yaisazove yakanaka kwazvo.
Mwedzi mitatu yapfuura, apo Spotify yakazivisa mhedzisiro yezvemari yekota yekutanga ye2020, iyo nhamba yevanobhadhara vanyoreri yaive mamirioni zana nemakumi matatu. 130 mwedzi gare gare, iyo nhamba inomira pamamirioni 3, avhareji vangangoita mamirioni matatu vanyoreri vese mwedzi wega.
Kana kune iyo nhamba yevanyoreri veSpotify, isu tinowedzera huwandu hwevashandisi veiyo vhezheni ine vashambadziro, 161 mamirioni evashandisi, inogadzira vanosvika mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe evashandisi vanoshanda pamwedzi, iyo inomiririra kuwedzera kwe 29% zvichienzaniswa nenguva yakafanana yegore rapfuura. Kana isu tichingotaura nezvevashandisi vakabhadharwa, iyo yekuwedzera ichienzaniswa neyegore rapfuura ndeye 27%.
Zvinoenderana nekambani yeSweden, yekutarisa chiitiko chadzokera kune zvakajairwa pamberi pe coronavirus, kunze kweLatin America, uko kubereka kwakadzikiswa ne6%. Kunyangwe paine manhamba anoshamisa, mari yekushambadzira yakadonha ne21%, ichisimbisa zvakare kukanganisa kwakakonzerwa necoronavirus pane ese midhiya anoita raramo kubva kushambadziro.
CNBC inodaro Spotify yakatumira kurasikirwa kwemamiriyoni makumi matatu nemashanu euros, kurasikirwa kwakakura kupfuura zvavaitarisira uye kuri kukonzerwa nemitero iyo yaifanirwa kubhadhara muSweden, uko kwakavakirwa, nekuda kwekuwedzera kwemari kubva pamutengo wemasheya, kuwedzera kwakamira pamamiriyoni gumi nematanhatu emamiriyoni.
Izvi zvinokonzerwa Spotify inofanirwa kubhadhara 31,42% kuhurumende yenyika kune chero bhenefiti iyo mushandi anowana kana achinge achishandisa sarudzo dzemasheya kana kuwana zvikamu zvakatemerwa. Ipo Apple, Microsoft, Amazon, Google nevamwe vachiramba vachibhadhara pasi pe1% muIreland ... Hazvingashamise kuona kuti mune ramangwana sei, Sweden inosara isina dzimbahwe rayo inozivikanwa kwazvo pasi, pamwe naIkea.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Spotify inoramba iri miriyoni yemamiriyoni mazana matatu evashandisi vemwedzi
JOSE LUIS Couto akadaro
Ini ndinofunga iwe unofanirwa kugadzirisa iwo musoro wenyaya nekuti wakanyorwa zvakashata.
"Spotify inogara miriyoni imwe yemamirioni mazana matatu evashandisi pamwedzi", kana ichifanira kuti "Spotify inogara miriyoni imwe yemamirioni mazana matatu evashandisi vemwedzi."
Zvinorehwa nemutsara uyu zvinoshanduka zvakanyanya.
Pindura kuna JOSE LUIS CoutO
Maitiro ekutarisa kuti inguva yenguva yekugadzirisa pane yako Mac
Chirevo chaTim Cook pamberi peCongress nezve antitrust